MPANAO GAZETY SANDOKA : Nahazo fahafahana vonjimaika ny havan’ireo mpifoka rongony
Ny alatsinainy teo no natolotra ny fampanoavana ireo roalahy tratra nifoka rongony sy ny havany nisandoka ho mpanao gazety. 21 décembre 2017
Naiditra am-ponja vonjy maika izy telolahy tratra nifoka rongony ary nahazo fahafahana vonjy maika kosa ilay nisandoka ho mpanao gazety. Raha tsiahivina moa dia ny marainan’ny alahady no nisy niantso ny polisy fa misy andian-jatovo mifoka rongony teo Tsaramandroso ambany. Rehefa tonga ny polisy dia tanora telo no hita teo, nandositra ny roa ary nifanenjehana ary tsy nihetsika kosa ny fahatelo.
Nilaza moa ny havan’ireo roalahy nandositra ireo fa nampiharana herisetra ny havany nandritra ny fisamborana ka haka sary azy ireo tao amin’ny tranomaizina nametrahan’ny polisy azy no nahatonga ilay havany nisandoka ho mpanao gazety. Tratra ihany anefa rehefa natao ny fanamarinana ka dia nanaraka ny havany tao an-tranomaizina koa ary niara-natolotra ny fampanoavana. Tsiahivina moa fa anisan’ny mampirongatra ny asan-jiolahy eto Mahajanga ankehitriny ny fifohana jamala. Raran’ny lalàna ny fambolena, fivarotana ary fifohana azy io.
Betsaka ireo tanora eny amin’ny fokontany no mifoka jamala ary manao asa fanendahana sy sinto-mahery avy eo. Efa mailo ny mponina izay tena leom-boananana ka raha vao mahita dia miantso avy hatrany ny mpitandro filaminana. Rehefa voasambotra anefa ireo tanora, indrindra ireo zaza tsy ampy taona manao asan-jiolahy dia misy hatrany ny lazaina fa olobe amin’ny tanàna manelanelana na manao tsindry amin’ny tompon’andraikitra hamoahana azy ireny. Tamin’ity indray mitoraka ity moa dia niafara tany am-ponja ny an’izy telo lahy ireto
Naiditra am-ponja ilay lehilahy, arahin’ny Fitsarana maso ilay vehivavy namany FISOLOKIANA AVO LENTA (158) 14 octobre 2020 Ben’ny tanàna voarohirohy ho nanolan-jaza 9 taona mpiasa an-trano TANGAINONY – FARAFANGANA (144) 14 octobre 2020 Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo ALASORA (98) 16 octobre 2020 Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga ANTSIRANANA (78) 16 octobre 2020 Mpiambina sivily iray nigadra, roa hafa navotsotra ZAZAVAVIKELY ROA VOAOLANA TENY IVATO (76) 19 octobre 2020 Mpanendaka gaigilahy roa nidoboka am-ponja eny Antanimora ASAN-JIOLAHY ENY ISOTRY (61) 16 octobre 2020